Search မြန်မာ လိုးကားများ - BajarFB.com
Search Results - မြန်မာ လိုးကားများ
မတ်မတ်ကိုချစ်လား.. Vk မှာလည်း မတ်မတ်တင်ထားတယ်နော်..
မတ်မတ်ကိုချစ်လား.. Vk မှာလည်း မတ်မတ်တင်ထားတယ်နော်.. Thin Zar Aung5Sep 2018 · 28K views
DVB TV - 13.02.2014 - ရန်ကုန်က ဟော်တယ်တွေမှာ ချစ်သူများနေ့ဆိုရင် လူငယ်တွေစုံတွဲတွေ များနေတဲ့သတင်းကို ဦးဖြိုးဝေသိန်း ပေးပို့ထားပါတယ်။..... Win Ko Hlaing 31 Jul 2014
#မြန်မာ ချောင်းရိုက် #ဗီဒီယို !
#မြန်မာ ချောင်းရိုက် #ဗီဒီယို ! ရိုးရိုး ပစ်မလား ? လောင်ချာ နဲ့ထုမလား ? ☎️ ဖုန်းနံပါတ် -09 256070900 , 09 73206348 ============================ 💢 မှတ်ချက် ။ ။ အွန်လှိုင်းပေါ်မှာ အွန်လှိုင်း လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ရောင်းနေကြတဲ့တရားမဝင် လေလုံးထွား ကြီးဆေး တောင်ဆေး ကြာဆေးတွေ အကုန် လုံးဝယ် သုံးကြည့် ပြီး သင့် ချွေးနည်းစာတွေကို ဖြုန်းပြီး ရောဂါ မျိုးစုံ ရအောင် အရင်ရှာပြီးမှ . . . . . 🧡💛 ဒီဆေးတွေကို သုံးကြပါနော် ! 💛🧡 😌😌 ဆီ နဲ့မြောင်းပုတ်ရေ ဘယ်လောက်ကွာလည်း ဆိုတာ ပိုသိသာသွားပါ လိမ့်မယ်နော် ! 🤮🤮 ❌🤔နာမည်ကြီး ဂျပုမင်းသားအိုကို ပိုက်ဆံတွေပုံပေးကြော်ငြာရိုက်ပြီး ဒီ မင်းသား သုံးနေတဲ့အမေရိကန်ဆေးပါ ဆိုပြီး ဆိုင်ဖွင့်ပြီး မတန်တဆ ဈေးကြှီးကြီး နဲ့ဘာအာနိသင်မှမပြတဲ့ ဆေးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖန်တီးထားတဲ့Comment တွေပြပြီး ဂျင်းထည့် ရောင်းနေတာလည်း တွေ့ နေရပါတယ်နော် !❌🤔 =============================== 🤷‍♂️( ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ်ရမှာနော် ! ) 🤷‍♀️ 💪💪🥙 ကျန်းမာပြီး ခွန်အားဖြစ်စေဖို့မဖြစ်မနေ စားသောက်ရမည့် အစားအစာများ 🥙💪💪 🍉ဖရဲသီး ၊ 🥑 ထောပတ်သီး ၊ 🍌 ဖီးကြမ်း ဌက်ပျော ၊ 🍌 သီးမွှေး ဌက်ပျော ၊ 🥛 ဒိန်ချဉ် ၊ 🍡 ရုံးပတေသီး ၊ 🔅 ဂျင်း ၊ 🥕မုန်လာဥနီ ၊ 🥓 ငါးရှဉ့် ခြောက်စပ် ၊ 🥜 ဗာဏာစေ့ ၊ 🥐သစ်ကြားသီး ၊ 🥜သီဟိုစေ့ တို့ကို မိမိ တစ်ပတ် စားသောက်သည့် အစားအသောက်များထဲတွင် တစ်ရက်လျှင် အနည်းဆုံး 2️⃣ နှစ်မျိုး သို့ 3️⃣ သုံးမျိုး ပါအောင်စားပေးရပါမည် ။ 🍅 ကြက်သွန်နီ ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ခရမ်းချဉ်သီး တို့ ကို နေ့ တိုင်းထမင်းနှင့် အတူ အနည်းဆုံး 1️⃣ ကြိမ် ( နေ့ လည်စာ ) စားပေးရပါမည် ။ 1️⃣ တစ်ရက်လျှင် ရေ အနည်းဆုံး 2️⃣ နှစ်လီတာ သောက်ပေးရမည် ။ ❌ ဆေးလိပ် ၊ အရက်၊ ကွမ်း စသည်တို့ သည် ယောင်္ကျားဟော်မုန်း ၊ ယောင်္ကျားခွန်အား နှင့် စွမ်းဆောင်အားတို့ ကို ဆိုးရွားစွာကျဆင်းစေပါသဖြင့် ရှောင်ရပါမည် ။ ❎ မရှောင်နိုင်လျှင် အနည်းဆုံး 5️⃣0️⃣ % လျော့ရပါမည် ။ 🍷ဝိုင်အနီ တစ်ရက်လျှင် ဝိုင်ခွက် 2️⃣ ခွက်သောက်ပေးပါက ကောင်းပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း လုံးဝ မသုံးသူများ ပန်းသေ ၊ ပန်းညိုး ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းများ လုံးဝ ပျောက်ကင်းလိုပါက 🔻 " ပါဝါဟန်းနီး " 1️⃣ ဘူးသောက် " ပါဝါလိုးရှင်း " 1️⃣ ဘူး လိမ်းပေးပါရန် ။ မပျောက်ကင်းသေးပါက သောက်ဆေး 3️⃣ ဘူးအထိသောက်ပြီး လိမ်းဆေး 1️⃣ ဘူးကုန်အောင် လိမ်းလိုက်ပါက ယူပစ်သလိုသေချာပေါက် ပျောက်ပါမည် ။ ☑️အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း သုံစွဲးသူများ ပန်းသေ ၊ ပန်းညိုး ၊ သုတ်လွှတ်မြန်ခြင်းများ လုံးဝ ပျောက်ကင်းလိုပါက 🔻 " ပါဝါဟန်းနီး " 1️⃣ ဘူးသောက် " ပါဝါလိုးရှင်း " 1️⃣ ဘူး လိမ်းပေးပါရန် ။ မပျောက်ကင်းသေးပါက သောက်ဆေး 9️⃣ ဘူးအထိသောက်ပြီး လိမ်းဆေး 6️⃣ ဘူးကုန်အောင် လိမ်းလိုက်ပါက ယူပစ်သလိုသေချာပေါက် ပျောက်ပါမည် ။များသောအားဖြင့် ( 8️⃣0️⃣ % ခန့် မှာ ) 6️⃣ ဘူးသောက် 4️⃣ ဘူး လိမ်းရုံဖြင့် ရောဂါ ပျောက်သွားကြပါသည် ။ ☑️ အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း လုံးဝ မသုံးသူများ ကြီးချင် ရှည်ချင် ထွားချင်ကြပါက 🔻 ပါဝါလိုးရှင်း 1️⃣ ဘူးလိမ်း ပြီး လေစုပ်ပြွန်စက်ဖြင့် အနည်းဆုံး တနေ့2️⃣ ကြိမ် ၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ပုံမှန် 1️⃣5️⃣ မိနစ်ခန့်ဆွဲလိုက် လွတ်လိုက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါက 2️⃣ ပတ် မှ 3️⃣ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ထွား / ရှည်လာပါလိမ့်မည် ။လိမ်းဆေးချည်းဘဲ သုံးပါက အနည်းဆုံး 2️⃣ လမှ 5️⃣ လအထိ တစ်နေ့2️⃣ ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ☑️ အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ 〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ 🔴 ဆေးလိပ် ၊ အရက် ၊ ကွမ်း သုံးသူများ ကြီးချင် ရှည်ချင် ထွားချင်ကြပါက 🔻 ပါဝါဟန်းနီး 2️⃣ ဘူးသောက် ပါဝါလိုးရှင်း 1️⃣ ဘူးလိမ်း ပြီး လေစုပ်ပြွန်စက်ဖြင့် အနည်းဆုံး တနေ့2️⃣ ကြိမ် ၊ တစ်ကြိမ်လျှင် ပုံမှန် 1️⃣5️⃣ မိနစ်ခန့်ဆွဲလိုက် လွတ်လိုက် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပေးပါက 3️⃣ ပတ်မှ 5️⃣ ပတ်အတွင်း သိသိသာသာ ထွား / ရှည်လာပါလိမ့်မည် ။လိမ်းဆေးချည်းဘဲ သုံးပါက အနည်းဆုံး 2️⃣ လမှ 5️⃣ လအထိ တစ်နေ့2️⃣ ကြိမ် ပုံမှန်လိမ်းပေးရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ☑️ အထက်တွင် ရေးတင်ပေးထားသောက် အစားအသောက်များကို ရှင်းပြထားသည့် အတိုင်း စားသောက် ပေးပါရန် အထူးလိုအပ်ပါသည် ။ ============================== ( ရပ်ကြည့်လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ်လုပ်မှ တကယ်ရမှာနော် ! ) ကျပ် တစ်ထောင်တည်းနဲ့တစ်ညလုံး7ခါ 8 ခါ တောင် မမောမပန်းနဲ့လန်းလို့ ရတဲ့ တခါသုံး 💜 ယောင်္ကျား အားမာန် ပါဝါဟန်းနီး 💜 သောက်ဆေးတွေ မှာဝယ်လို့ ရပြီနော် ! ( ရပ်ကြည့် လို့ အမြတ်မရှိ ! တကယ် လုပ်မှ တကယ် ရမှာ နော် ! ) 💰ဈေးနှုန်းများ 💰 ➖➖➖➖➖ 🚩 ( ပါဝါ ဟန်းနီး ) - တဘူး 💰 16,000 ကျပ် 🚩 ( ပါဝါ လိုးရှင်း ) - တဘူး 💰 21,000 ကျပ် 🚩 လေစုပ်ပြွန်စက် - တလုံး 36,000 ကျပ် အမျိုးသမီးအင်္ဂါကျဉ်း ရောဂါကင်း မွှေးဆေး 🚩P-V Care Gel (ပီဝီကယ်ယား ဂျယ်လ်) 90ml - တဘူး 💰 21,000 ကျပ် >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ☎️ ဖုန်းနံပတ်များ 🚩 09 256070900 , 09 73206348 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ထိုင်း နဲ့မလေး မှာ အိမ်အရောက်ပို့ စန နဲ့ဝယ်လို့ ရပြီ နော် ! 👑 ယောင်္ကျား အားမာန် ပါဝါဟန်းနီး 👑 Registration Licence No: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR - 013089 နဲ့တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ❗️ 👑 ယောင်္ကျား အားမာန် ပါဝါလိုးရှင်း 👑 Registration Licence No: ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ တိုင်းရင်းဆေးဝါး လိုင်စင် မှတ်ပုံတင်အမှတ် - TMR - 013306 နဲ့ တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထုတ်လုပ်ထားပါတယ် ❗️ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> ရိုးရိုးပစ်ချင်လား ? လောင်ချာ နဲ့ထုချင်လား ? 💢 မှတ်ချက် ။ ။ အွန်လှိုင်းပေါ်မှာ အွန်လှိုင်း လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ရောင်းနေကြတဲ့တရားမဝင် လေလုံးထွား ကြီးဆေး တောင်ဆေး ကြာဆေးတွေ အကုန် လုံးဝယ် သုံးကြည့် ပြီး သင့် ချွေးနည်းစာတွေကို ဖြုန်းပြီး ရောဂါ မျိုးစုံ ရအောင် အရင်ရှာပြီးမှ . . . . . 🧡💛 ဒီဆေးတွေကို သုံးကြပါနော် ! 💛🧡 😌😌 ဆီ နဲ့မြောင်းပုတ်ရေ ဘယ်လောက်ကွာလည်း ဆိုတာ ပိုသိသာသွားပါ လိမ့်မယ်နော် ! 🤮🤮 =============================== ❌🤔နာမည်ကြီး ဂျပုမင်းသားအိုကို ပိုက်ဆံတွေပုံပေးကြော်ငြာရိုက်ပြီး ဒီ မင်းသား သုံးနေတဲ့အမေရိကန်ဆေးပါ ဆိုပြီး ဆိုင်ဖွင့်ပြီး မတန်တဆ ဈေးကြှီးကြီး နဲ့ဘာအာနိသင်မှမပြတဲ့ ဆေးကို ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဖန်တီးထားတဲ့Comment တွေပြပြီး ဂျင်းထည့် ရောင်းနေတာလည်း တွေ့ နေရပါတယ်နော် !❌🤔 =============================== 💰ဈေးနှုန်းများ 💰 ➖➖➖➖➖ 🚩 ( ပါဝါဟန်းနီး 1000 တန် သောက်ဆေး7ဘူးပါ ) - တထုပ် 💰 7,000 ကျပ် 🚩 ( သောက်ဆေးနဲ့ပါဝါလိုးရှင်း လိမ်းဆေး တွဲပါတဲ့ 1800 တန်5ဘူးပါ ) - တထုပ် 💰 9,000 ကျပ် ရှမ်း ချယ်ရီမြေ မှ လူခန့် ကြီးများ အကြိုက် " ပါဝါ ဟန်းနီး " 26 Nov 2020 · 242K views
မိနျးကလေးတှေ လိငျစိတျဖွဈပျေါနရေငျ ဘယျလိုအခကျြပွလဲ?
မိနျးကလေးတှေ လိငျစိတျဖွဈပျေါနရေငျ ဘယျလိုအခကျြပွလဲ? ဒီဗှီဒီယိုဖွဈမွောကျအောငျ အဓိကပံ့ပိုးကူညီပေးတာကတော့ @မြန်မာ 999 မှဖွဈပါတယျ။ လူကွီးမငျးတို့ရဲ့ စီးပှားရေးလုပျငနျးမြား ကွျောငွာထညျ့သှငျးလိုပါက 09971766350 (Viber) ကိုဆကျသှယျနိုငျပါသညျ။ #MysticMyanmar_tv #japan_girls Crush သူ့ဆီသို့ 1 Jul · 395K views
မြန်မာ Tik Tok ဟာသ 😂😂😄😄😀
မြန်မာ Tik Tok ဟာသ 😂😂😄😄😀 Tik Tok ဟာသ2Dec 2020 · 525K views